Mpanamboatra sy mpamatsy fantsom-pamokarana fantsom-bokatra China | IVEN
Tsipika fanangonana fanjaitra ra
Ho an'ny famokarana fanjaitra ra karazana penina.
Fametrahana ny fanjaitra → Fametahana fanjaitra → Fametahana → Fanamainana → Famantarana ny fantsona fantsona → Fikarohan'ireo fanjaitra fanjaitra → Siliconisation → Fanesorana fako → Fanjaitra miaro fanjaitra lava → Famonoana fanakonana → Famerenana ny fanjaitra → Fiarovan-tena amin'ny lamba fonosana → Fanidiana fanidiana → Fanjaitra fohy miaro fonony Fampirimana → Fanindriana ny fanaronana → Vokatra vita.
Famaritana ny gara miasa
Famahanana mpihazona fanjaitra
Tantano amin'ny vibrator ny mpanjaitra fanjaitra, avy eo ampidiro ny làlan'ny slide ary apetaho amin'ny tadin'ny fitaovana.
Ny fametahana ny fanjaitra amin'ny fomba fanjaitra fanjaitra, ny fanjaitra dia nakarina amin'ny seza fanjaitra amin'ny alàlan'ny fanesorana ny lasitra fipetrahana fanjaitra ary avy eo dia arotsaka amin'ny seza fanjaitra, aorian'ny fametahana ny fanjaitra, ahodino ny lalana ary ampidiro ny gluing station.
Eto dia ampitao amin'ny fahitana ny fanjaitra
Ny gluing dia tarihin'ny maotera servo Panoney japoney iray, ary misy torolàlana roa miampy manampy amin'ny fitaterana ny fitoeran-dity mba hamoahana lakaoly. Ny boaty fametahana lakaoly dia mandray an'i Lenuz Aleman mba hamaritana ho azy raha misy lakaoly na tsy misy ny boaty fametahana lakaoly, ary raha tsy misy milina lakaoly dia mijanona ho azy, ary ny fanairana dia aseho eo amin'ny efijery mikasika.
Ny tionelina fanamainana dia ny fanamainana ny lakaoly, ny boaty fanamainana dia hafanain'ny fantsom-boasary fantsom-bozaka fanamafisam-peo, miaraka amin'ny refy fampisehoana ankehitriny, ny mpanara-maso ny mari-pana dia mifehy ny mari-pana hahatratra ny diplaoma. Ampidiro ny fizahana sary rehefa avy maina.
Famantarana ny fanakanana lavaka
Mba hijerena raha voasakana ny fanjaitra na tsia. Fomba entina mitsoka rivotra izy io. Tsaraina raha sakanan'ny rivotra ny fanjaitra na tsia. Ny sensor dia mamantatra ny iray sy iray ary miaraka amin'ny barometatra. Rehefa tsy mahatratra ny fenitra ny tsindry amin'ny rivotra dia hihemotra avy hatrany izy ary hanala ilay fanjaitra natsatoka tamin'ny tsipika lehibe. Mihodina ny làlana manaraka.
Famantarana burrs fanjaitra
Eto ny gara dia afaka manampy amin'ny detection CCD ho an'ny burrs fanjaitra. Rehefa voamarika ireo vokatra tsy voamarina, dia hesorina amin'ny faritra misy ny fiharatana izy ireo, ary avy eo dia miditra ao amin'ny detection leak. (Ny fandeferana amin'ny haavon'ny tendrony dia ao anatin'ny 0.3, ary ny burr an'ny 0,05 * 0,05 dia azo tsapain-tanana)
Helix avo roa heny miaraka amin'ny diloilo silika, mihodina degre 180, misy fitaovana mitsoka ao anaty fantsom-fanjaitra rehefa nohosorana menaka, nopetahina menaka avy any ambany ka hatrany ambony ny menaka silikônina, miaraka amin'ny barometatra, afaka manivana sy paompy ho azy izy rehefa tsy miakatra ny tsindry. amin'ny fenitra. Potsika pneumatika ny menaka gazy hialana amin'ny loharanon-kery ary hiteraka afo. Aorian'ny vita ny silikasy, handeha ho any amin'ny tobin'ny fandavana fako manaraka.
Fanesorana ny fako
Ny fandavana ny tobim-pako dia fanesorana vokatra feno amin'ny alàlan'ny sary sy ny fivoahan'ny fitrandrahana taova.
Fanjaitra miaro ny fanjaitra lava
Izy io dia mandray ny fomba slide mba hametrahana fonosana miaro ny fanjaitra, ny fitaovana dia vy tsy misy fangarony 304, fitaovana fanamarihana Autonics, na misy tranony ary avy eo afindra amin'ny làlam-pandehanana mba hikorontana, ny valaharana eo anoloana dia misy varingarina iray ihany, electromagnetic Ny valizy dia voafehy tsirairay. Aorian'ny fanandramana ny fonon-kazo, na tsy fanjaitra ny fanjaitra dia tsy hesorina ny sarony raha tsy eo ny fanjaitra, mba hiantohana ny fako sy ny taham-pahaizan'ny entana.
Fanindriana ny fonony
Eo ambanin'ny fonony fiarovana manery, misy toerana afovoany ny fonony fiarovana mba hahazoana antoka fa miditra ao anaty fonony ny fanjaitra. Aorian'ny fanerena azy dia halefa ao anaty vokatra feno banga
Ny fanjaitra rotary dia clamping sy nadika tamn'ny manipulator, ary avy eo navadika 180 degre aorian'ny siliconization, ary nampiana tamina fitaovana
Ny firakotra vita amin'ny fingotra dia mandray fomba mihosotra. Mandalo haingana ny fonony ary mianjera ao amin'ny arofanina. Ny sarona dia latsaka amin'ny tendron'ny fanjaitra amin'ny alàlan'ny faritra voahodina. Ny laharana eo aloha amin'ny rakotra dia voafehy iray hatramin'ny iray. Raha misy tsy fahampian'ny vokatra dia tsy hapetraka ny sarona. Hamarino tsara ny fako amin'ny tranom-boaloboka sy ny tahan'ny fandrefesan'ny tranony ambony.
Kitapo malefaka manindry
Ny fonosana vita amin'ny fingotra dia mametaka ny tanany vita amin'ny fingotra ary manindry azy, manindry ilay fonony
Fanjaitra fohy-fanjaitra manarona Famonoana
Izy io koa dia mandray ny làlan-tsary, ny vy dia vy tsy metaly 304, ary ny fahitana ny sensor Autonics. Na misy palitao dia afindra amin'ny làlan-kaleha mba hikorontana. Ny laharana eo aloha amin'ilay palitao dia misy varingarina ihany isaky ny iray. Ny valizy solenoid dia fehezin'ny tsirairay. Aorian'ny fitsapana ny fonony, na tsy misy ny fanjaitra dia tsy esorina ilay fonony raha tsy eo ny fanjaitra, mba hiantohana ny fako amin'ny fonony sy ny tahan'ny fandefasana fonony.
Fanindriana ny fanjaitra fohy
Ny fonony dia mametaka ny fonony fohy amin'ny fanjaitra ary manindry azy, manindry ilay fonony
Aorian'ny famokarana vokatra vita, mitodiha any amin'ny toeram-ponenana fanjaitra fahanana, ary vita ny tsingerina manontolo.
Ny tombotsoan'ny masinina fonosana fantsom-bokatra IVEN
1.High capacitive 12000pcs / ora.
2.H automation avo lenta, fizotry ny fiasa mirindra sy fanatsarana ny fampidirana, mpandraharaha mahay 3-4 dia afaka mitantana tsara ny tsipika famokarana iray manontolo manomboka amin'ny fametahana ka hatramin'ny faran'ny fanjaitra vita.
3.Ny fitaovana fizahana tsipika iray manontolo izay mampiasa marika levera ambony toa an'i Alemana Lenuze, OMRON, hifehezana ny famahanana, toeram-piantsonana, hahazoana antoka ny tahan'ny mendrika.
5.Mampiasà fanaraha-maso maotera ho an'ny ampahany manan-danja mihetsika, mifehy tsara ary mihetsika malama.
6.Ilay fitaovana fampandrenesana, toy ny tsy fahombiazana, ny jamam-pitaovana, ny tsindry amin'ny rivotra ambany ary ny tsy fisian'ny menaka silikon dia hanaitra sy hanome fampahatsiahivana ao amin'ny HMI.
7.Key ampahany sy fitaovana elektrika mampiasa marika Top mba hahazoana antoka fa ny fampiasana tsipika maharitra sy maharitra.
Structure 8.High Quality: Ny vatan'ny tena dia mampiasa vy avo lenta ho an'ny fitondrana lanjany, ny ampahany amin'ny vokatra ary ny fifandraisana dia mandray ny vy tsy misy fangarony avo lenta ho an'ny fanadiovana mora kokoa. Mihaona amin'ny fenitra GMP
9.Ekeo ny fanaingoana amin'ny detection CCD.
Fanjaitra azo ampiharina Karazan-penina
Haingam-pandeha 10000-12000pcs / ora
Fahamarinana fitadiavana CCD ho an'ny glitch fanjaitra 0.05 * 0.05 (mifototra amin'ny fandeferana amin'ny haavon'ny tendrony dia ao anatin'ny 0.3)
Power 380V / 50HZ, 18KW
Rivotra voafintina Fanerena rivotra madio voadidy 0.6-0.8Mpa
Fanjifana rivotra voahidy 70 M3 / ora
Fibodoana habakabaka 6080 * 11200 * 1800 mm (L * W * H)
Seho mpampiasa tsara
Previous: Masinina fanaraha-maso maivana LVP (tavoahangy PP)
Manaraka: Andalana fitambarana fantsom-pamantarana viriosy